Ruushka oo Afrika siinayo taageero aan wax shuruud ah ku xirneyn | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ruushka oo Afrika siinayo taageero aan wax shuruud ah ku xirneyn
Ruushka oo Afrika siinayo taageero aan wax shuruud ah ku xirneyn
Madaxweynaha Ruushka Vladmir Putin ayaa sheegay waddankiisa inuu qaaradda Afrika u diyaariyey taageero aysan la socon shuruudaha quwadaha reer galbeedka ay ku xiraan.
“Waxaan arkeynaa sida ay waddamada reer galbeedka ay u cadadiyaan, u handadaan isla-markaana musuqmaasuqa ugu horseedaan dowlado madax bannaan oo qaaradda Afrika ka tirsan,” ayuu Mr Putin oo wareysi siiyey wakaaladda wararka ee TASS xilli uu soo dhow yahay kulanka madaxda Afrika uu la yeelanayo.
“Waxay u adeegsanayaan qaabab sidan oo kala ah iyaga oo isku dayaya inay ku soo celiyaan raadadkii lumay iyo awooddii ay ku lahaayeen deegaannadoodii hore ee ay horay u guumeysan jireen iyaga oo hadba khiyaanooyin cusub u maleegaya si ay qaaradda Afrika faa’idada ugu badan u hesho.” ayuu sii raaciyey.
Ruushka ayaa martigelinaya 47 hogaamiye oo Afrikaan ah iyada oo kulanka Ruushka iyo madaxda Afrika uu soconaya 23-24 bishan October, kulanka ayaa ka dhacaya magaala xeebeedka Sochi.
Mr Putin waxaa kale oo uu sheegay in xiriirka Afrika uu dalkiisu la leeyahay inuu wax weyn iska baddalay, isaga oo carrabka ku dhuftay iskaashiyada dhinaca militariga oo uu Ruushka wakhti xaadirkan la leeyahay 30 dal oo Afrikaan ah oo uu hubka ka iibiyo.
Rwanda ayaana ka mid ah waddamada xiriirka qotoda dheer la leh Ruushka.
“Golaha wasiirrada Rwanda ayaa dhawaan muujiyey in Ruushka lala galo heshiis sare looga qaadayo tamarta Niyuukilarka ” isla markaasna si nabadgelyo ah loo isticmaalaya”, ayuu qoray wargeyska East Africa.
Teknooloojiyaddaasi oo la sheegay in loo adeegsanayo beeraha, wax soo saarka tamarta iyo ilaalinta deegaanka, ayuu